> Resource > Android > Sida loo kaabta Samsung Galaxy Note 3
In uu qof kasta oo si guul leh xoojiyaa Note 3? Waxaan isku dayay si adag si aad u hesho in uu sameeyo unchecking faylasha qaar si gurmad, xira iyo dib daarin qalabka, xitaa tegey ilaa xad ah ee dib - rakibidda darawalka 3.0 USB iyo dhan ayaan ka heli dib markii gurmad waa MTP ku guuldareystay baadi on my qalab.
Dhab ahaantii, Samsung Kies aan sida kaliya ee ay gurmad aad Note Samsung 3. Haddii aad raadinayso siyaabo kale, aad tahay meel ku habboon yahay. Maqaalkani waxa uu u socdo si uu idiin tuso habab fudud oo ku saabsan taageero oo dhan files aad Note Samsung 3 ilaa computer ama telefoon / kiniin. Marka hore, ha iga dhigin cadeeyay in qalab aan dooneynaa in ay isticmaalaan waa qalab dhameystiran - Wondershare MobileGo . Waxaa loo qorsheeyay in aad nolosha mobile fududeeyey. Waxaa aad u ogolaanaya in ay gurmad aad Samsung Galaxy Note 3 xogta computer ama kala iibsiga ka Note Samsung Galaxy 3 ilaa telefoonada kale oo kiniin ah.
Habka 1: kaabta Samsung Galaxy Note 3 u computer
Habka 2: kaabta Samsung Note 3 ilaa a phone / kiniin
Habka 1: kaabta Samsung Galaxy Note 3 ilaa kombiyuutarka
Sida aad ogtahay, music, videos iyo sawiro ku badbaaddeen kaarka SD ah Note Samsung Galaxy 3 ah iyo in si toos ah taageeray kartaa ilaa computer la hal cable USB ah. Si kastaba ha ahaatee, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, abuse wac iyo kuwa kale oo ay ku kaydsan yihiin in kaadhka xusuusta telefoonka, taas oo aan la akhrisan kartaa oo taageeray in kombiyuutarka. Ha ka werwerin in. Wondershare MobileGo waa ay awoodaan in ay farriimo gurmad qoraalka, barnaamijyadooda, xogta app, jadwalka taariikhda, abuse wac, music, videos, sawiro, playlist info, xiriirada, iyo waraaqaha si kombiyuutarka effortlessly.
Tallaabada 1. Isku Ogoow Samsung Galaxy 3 ilaa kombiyuutarka
Marka hore, ordo software-ka kombiyuutarka iyo xiriiriyaan Note Samsung Galaxy 3 deeruhu in cable USB ah oo wuxuu galay booska computer aad. Your Note Samsung Galaxy 3 dhowaan la ogaan doonaa ka dibna u muuqataa in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. kaabta Galaxy Note 3
In uu furmo suuqa hoose, guji kaabta One-Click iyo suuqa kala kaabta soo booda. Dooro waxyaabaha aad ku socoto in ay dib u up. Markaas, guji Back Up . Maalin maalmaha ka mid, haddii aad khasaare xogta, waxaad isticmaali kartaa file ah gurmad la soo celiyo Fiiro aad Galaxy 3.
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad gurmad faylasha doortay? Tag column ka tegey, oo aad arki doonaa qaybaha file kala duwan. Dooro mid ka mid category iyo xulo files doonayo ka dibna dib iyaga. Si aad dib ilaa dukumentiyada, waxaad riixi kartaa File. Dhammaan files, kaadhka xusuusta telefoonka iyo kaarka SD ku qoran yihiin. Raadi waraaqaha aad la doonayo iyo jiididda iyo iyaga hoos u kombiyuutarka.
Marka aad telefoon cusub, sida iPhone 5s, aad rabto in aad xog ka Note Samsung 3 wareejiyo qalabka cusub. Xaaladdan oo kale, si ay xog gurmad ka Note Samsung 3 qalab cusub, weeyna u maleeyeen in aad isticmaasho Phone in ay feature Transfer Phone in Wondershare MobileTrans .
Tallaabada 1. Connect labada Fiiro Galaxy 3 ah iyo telefoonka kale / kiniin ah
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan labada qalabka kombiyuutarka. Barnaamijku wuxuu kala iibsiga telefoonka lagu ogaan doonaa oo labadoodaba u muujiyaan in ay suuqa kala hoose. Lugood loo baahan yahay si loo soo dajiyo on your computer haddii aad qorshaynaysid in aad gurmad Galaxy Note 3 ilaa iPhone, iPad ama iPod taabashada ah.
Tallaabada 2. content in loo gudbin karaa
Transfer Xiriirada SMS Music Photos Apps Videos Log Call Calendar
Fiiro Galaxy 3 ilaa aalad Android
Fiiro Galaxy 3 ilaa iPhone ah
Fiiro Galaxy 3 ilaa phone Symbian ah
Tallaabada 3. Ogow kaabta 3 ilaa a phone / kiniin
Riix ah "Super Qalabka" on sare ee suuqa kala ugu weyn. Qeybta Sare, doortaan "Transfer Phone". Laga soo bilaabo magaca muujinta ah, aad u ogaato waxa ay ka dhigan tahay. In si deg deg ah, dooro "Phone in Transfer Phone". Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in labada qalabka waxaa lagu soo bandhigaa dhinac. Si aad xog gurmad ka Note 3 qalab kale, hubi waxa ku jira oo guji "Transfer". Taasi waa!